Ukusetyenziswa kunye nohlobo lweegiya ngokwe-asi okanye indawo yeShaft-umthengisi wokuhambisa umbane eSingapore pte ltd
Kuxhomekeke kwinjongo yayo, kukho iintlobo ezahlukeneyo zegiya ezenziweyo ngokobungakanani, iisefu, izinto, njalo njalo, zonke ziyilelwe ziyafumaneka kwintengiso. Ngokwamalungiselelo e-asi okanye i-PTO shaft, esetyenziselwa ukwahlula uhlobo ngalunye lwezixhobo, kukho iindlela ezahlukeneyo zendlela eyaziwayo yokuzihlela. Iindidi ze-3 zokucwangciswa kwe-shaft zikhona, oko kukuthi, i-shafts efanayo, i-axis engalinganiyo, kunye ne-non-intersecting okanye i-shafts shafts.
Okokuqala, kwinqanaba elifanayo, imigangatho ye-shaft efanayo luhlobo lwegiya ezidibeneyo. Ukuhambisa amandla eshukumayo esijikelezayo phakathi kweeshafti ezifanayo, zisebenza njengesixhobo. Yenzelwe ukusebenza kwexesha elide, izibonelelo zezi zixhobo zibonelela ngamandla amakhulu ehashe. Kananjalo xa isebenza, ayenzi ngxolo ingako kwaye inokuthwala umthwalo omkhulu. Ukuveliswa kwezi ntlobo zegiya kwelinye icala kudala i-axial thrust kwaye kuyabiza. Ngokuhambisa ngesandla njengokuhamba kweemoto kunye newotshi, ezi zixhobo zisetyenziselwa oomatshini ngokubanzi.
Okwesibini, ukuvumela ukuhanjiswa okuthe tye kwentshukumo kunye namandla phakathi kwee-axes ezi-angled ukuba zijolise kunye nomnye, ukujikeleza kwe-shaft gear kumthengisi we-PTO shaft kuyilelwe. Ukuwela kolu luhlu, ezi zilandelayo ziindidi zegiya ezinesithsaba segiya, i-coniflex, i-bevel kunye ne-angular. Ukufuna amandla kunye nesantya, injongo yabo kukunika amandla oomatshini kuba inokubamba umthwalo omkhulu wokulayisha. Izixhobo ezinqamlezileyo zibiza kakhulu xa kuthelekiswa neshafti efanayo. Ezi ntlobo zegiya zihlala zisetyenziselwa ukunika amandla usetyenziso lwaselwandle, ii-locomotives, ukubhola ngesandla, nokunye okuninzi.
Okokugqibela, ngelixa usebenzisa iigiya ezinee-asi ezinganqamliyo, ezisetyenziswa kwizicelo, ii-shaft gear ezingangqinelaniyo okanye ezingadibaniyo ezifuna ukuncitshiswa kwesantya esiphezulu sokubonelela ngokuhambisa umbane kwindawo encinci. Ngenxa yokuba iindleko zayo zemveliso zikwindawo esezantsi kakhulu, inesakhono esilinganiselweyo sokulayisha nangona lolona hlobo lubiza kakhulu lwegiya evela kumenzi we-PTO shaft. Ngokunciphisa ii-ratios ukonyusa ukusebenza ngokukuko, oku kubuyela umva kunokusonjululwa ngokulula.
Ukwahlulahlulahlula ukusetyenziswa kweegiya, le yenye yeenkqubo ezininzi. Iigiya zihlelwe ngokwezixhobo zethayitha yobubanzi obusetyenziselwa ukwenziwa ngokuchanekileyo, ukuvelisa izixhobo, inani loyilo lwezindlu kunye namanyathelo phakathi kwabanye.